कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्यो : स्वास्थ्य मन्त्रालय | Ratopati
कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्यो : स्वास्थ्य मन्त्रालय
नेपालमा कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको तेस्रो लहर मत्थर भएपछि पछिल्ला तीन चार दिनयता संक्रमितको संख्या बढेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार गएको २४ घण्टामा २ हजार ४९४ जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा ४९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
यस्तै, बुधबार ३१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने ७ गते १९ जना संक्रमित भएका थिए । ६ गते २८ संक्रमित हुँदा ५ गते २३ जना संक्रमित भएको मन्त्रालय जनाएको छ । यस्तै, छिमेकी राष्ट्र भारतमा दिन प्रतिदिन संक्रमितको सङ्ख्या बढ्दा नेपालमा संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।
नेपालमा यसअघि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो लहर फैलँदा छिमेकी राष्ट्र भारतमा कोरोना संक्रमण उच्च विन्दु पुगेको हुन्थ्यो । भारतमा उच्च बिन्दुमा पुगेको करिब तीन सातामा यहाँ संक्रमण दर तिव्र गतिमा फैलन सुरु भएको थियो ।
यसबेला छिमेकी राष्ट्र भारतमा एक्टिभ केस मात्रै ८२ हजारभन्दा बढी छ । गएको २४ घण्टामा १३ हजार १५९ नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । अर्थात् अघिल्लो दिनमा भन्दा ९४६ जना बढि संक्रमित भइ १३ हजार नाघेको छ ।
भारतमा १९ जून अर्थात असार ५ गते १२ हजार ७१७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । जून २१ अर्थात् असार ७ गते संक्रमितको संख्या बढेर १२ हजार २४९ जनामा पुगेको थियो भने असार ८ गते संक्रमितको संख्या ९४६ जना बढ्दा १३ हजार १९५ पुगेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले अस्तीभन्दा हिजोभन्दा आज संक्रमितको सङ्ख्या बढेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन् । परीक्षण गरेकामध्ये संक्रमण पुष्टि हुनेको अनुपात पनि बढेको देखिएकाले पूर्ण रुपमा सतर्कता अपनाउन उनले आग्रह गरे ।
नेपालको सरकारी आकँडाअनुसार बिहीबारको परीक्षण संक्रमण दर १.९६ प्रतिशत रहेको छ । बुधबार संक्रमण दर १.२७ प्रतिशत रहेको थियो । अघिल्लो सातासम्म संक्रमण दर ०.५ प्रतिशत रहेको थियो । छिमेकी राष्ट्र भारतमा संक्रमण बढिराखेकाले नेपालमा सतर्कता नअपनाएको खण्डमा संक्रमण बढ्ने उच्च जोखिम रहेको उनी बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय जनस्वास्थ्यको मापदण्ड उल्लघंन बढेको जस्तो देखिएकाले पछिल्ला दिनमा संक्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको देखिएको हो ।’ संक्रमणको जोखिम बढेकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न उनको आग्रह छ ।
खोप लगाउन बाँकी
सरकारी आंकडा अनुसार नेपालका कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० छ । जसमा ६९.२ प्रतिशतले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन् । खोपको लक्षित जनसङ्ख्या दुई करोड ३३ लाख २७ हजार ६१९ रहेको छ । जसमा दुई करोड २६ लाख ४९ हजार २७७ जना अर्थात् ९७.१ प्रतिशतले पहिलो मात्रा खोप लगाएका छन् । यस्तै, दुई करोड एक लाख ९६ हजार ४९६ जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन् । त्यस्तै, बुस्टर डोज ६१ लाख ९४ हजार १०९ जनाले लगाइसकेका छन् ।
कोरोनाविरुद्धको खोप नलगाएकाहरुलाई खोप लगाउन अधिकारीले अनुरोध गरे । उनका अनुसार कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध भएपनि कुल जनसङ्ख्यामध्ये करिब २३ प्रतिशतले पूर्ण मात्रा खोप लगाउन बाँकी छ ।
पहिलो मात्रा लगाएर बसेकाहरु दोस्रो मात्रा लगाउन, दोस्रो मात्रा लगाएकाहरुलाई बुस्टर मात्रा लगाउन उनले आग्रह गरे ।
बिहीबारबाट ५ देखि १२ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कोरोनाविरुद्धको फाइजर खोप लगाइन सुरु गरिएको छ । २७ जिल्लाका विद्यालयहरुमा बालबालिकालाई खोप लगाउन सुरु गरिएकाले ती उमेर समूहका बालबालिकालाई खोप अभियानमा सहभागी हुन उनले आग्रह गरे । बालबालिका सुरु भएको खोप अभियानमा उत्साहजनक रुपमा सहभागिता रहेको डा. अधिकारीले बताए ।